Heha Abalandeli, Ungabathengi | Martech Zone
Heha Abalandeli, Ungabathengi
NgoMsombuluko, Agasti 23, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 URyan Smith
Akulula ukuthuthukisa isisekelo esikhulu sabalandeli Twitter. Indlela elula ukukopela nokumosha imali yakho uthenga izinkulungwane zabalandeli kwenye ye lezi “amabhizinisi” aku-inthanethi anikezela ngezinsizakalo ezinjalo.
Yini okufanele izuzwe ngokuthenga abalandeli? Ngakho-ke kuthiwani uma unabalandeli abangu-15,000 abangenayo intshisekelo ebhizinisini lakho nasemlayezo owudlulisayo? Ukuthenga abalandeli akusebenzi nje, ngoba ukuba nokulandela okukhulu ku-Twitter ngeke kuthinte ibhizinisi lakho ngaphandle kokuthi abalandeli bakho bakhathalele lokho okuthumela ku-tweeting.
Sonke siwubonile umphumela wokuba nabalandeli abaningi ku-Twitter; buza nje iSouthwest Airlines. Isizathu sokuthi abafana bathande Kevin Smith kungadala i-buzz enkulu kangaka ku-Twitter kungenxa yokuthi abalandeli bakhe abaningi banesithakazelo kulokho akushoyo.
Ibhizinisi lingaba nohlobo olufanayo lokulandela, kepha kunzima kakhulu futhi kuthatha isikhathi. Okokuqala, kuthatha okuqukethwe. Thuthukisa isu lekhasi lakho, nokuthi ufuna ukubeka ini kulo. Thumela imilayezo ebalulekile kulabo ongaba abalandeli bakho. Uma ukuthengisa bese uthumela ama-tweet mayelana namadili namakhuphoni. Thinta ngezinto ezenzeka ngemuva kwezigcawu ezingaba nentshisekelo kubabukeli bakho.
Okulandelayo, landela abantu noma izinkampani ezihambisana nebhizinisi lakho. Uma une-designer boutique ye-jean, bese ulandela abaklami nabaholi bemboni yezemfashini. Izithameli zakho eziqondisiwe zizolandela amakhasi afanayo, futhi zizokuthola ukuthi ulandela bani.
Ekugcineni, yiba nesineke. Imithombo yezokuxhumana ifana nokudoba. Uqhubeka uphonsa isicupho phandle lapho, futhi ngolunye usuku uzoqala ukubadonsela phambili njengokuhlanya. Sebenza, shesha, futhi uhlakaniphe ngokuqukethwe kwakho futhi isayithi lakho lizokhula.
Tags: ukuthenga abalandeli
URyan uyiMenenja yeSocial Media nokuThuthukiswa kweBhizinisi kwaRaidious. Unguchwepheshe wobudlelwano bomphakathi ogxile ekusebenziseni imithombo yezokuxhumana njengethuluzi lokuxhumana lokumaketha. URyan unolwazi kwezemidlalo, kwezepolitiki, kwezezakhiwo nakwezinye izimboni eziningi.
Ukubhuloga Kwebhizinisi eNingizimu Afrika
Aug 23, 2010 ngo-6: 23 PM
Ngingathanda ukuvuma, ngeshwa izinombolo ezinkulu zithwala isisindo esikhulu futhi ziwuphawu lwegunya. Ngingakuphonsa inselelo ukuthi uvivinye ukuthenga nenkampani eyodwa, bese ukhula ngezinto eziphilayo nenye. Uzothola ukuthi iqembu elinabalandeli abaningi lizokhula ngokushesha ngokomzimba. Ngifisa sengathi ngabe izinto bezihlukile kodwa akunjalo. Abantu bathanda ukuba ngamalungu… futhi izinombolo ezinkulu ziyakhanga.
Aug 23, 2010 ngo-6: 34 PM
Ngizwile zombili - yiba nomphakathi; imithombo yezokuxhumana kanye ne-tweet kuphela mayelana nebhizinisi lakho - noma ngicabanga ukuthi ungaba nama-akhawunti amabili. Angikwazi ukuhambisana neyodwa, ngakho-ke uthenga kuphi labo balandeli 🙂
Aug 24, 2010 ngo-10: 14 PM
Uma uzothenga izethameli ze-akhawunti ye-Twitter noma enye ingxenyekazi, kunendlela engcono yokwenza ngaphandle kokuthi “ukuthenga abalandeli” ngokoqobo - kunamapulatifomu wesikhangiso amaningi angaletha izinga elimangalisayo lokukhomba okuhlinzekwayo izithameli ezingathola okuqukethwe kwakho kufanelekile - futhi kujabulise -ngokukhomba kokuziphatha, ukubuyisela emuva, njll. Futhi, ngamanethiwekhi amaningi, ungathenga ngesisekelo se-CPA bese ukhokha kuphela lapho utshalomali lwakho lusebenza, futhi kukhona inzuzo eyengeziwe yokwenza umthelela emibonweni nasekuqwashiseni ngezindlela zokudala emithonjeni yezindaba ecebile ekhokha izinzuzo ngaphezu kokuchofoza.
Umqondo wonke wokuthenga abalandeli be-twitter muhle uma uyinkampani ephendula ngqo ethengisa impahla futhi edlala umdlalo wezinombolo. Umbono owesabekayo nganoma iyiphi inkampani ezama ukuhlukanisa futhi ingeze inani kumkhiqizo. Lokhu akuhlukile kunokuthenga uhlu lwe-imeyili, noma ukuthenga uhlu lweposi oluqondile. Kusengogaxekile encwadini yami, noma ngabe othile evuma ukukhokhelwa ngokungezwa. Ukuthenga abalandeli akulitholakali iphuzu - akukhona nje ngenani labalandeli, kumayelana nezinhliziyo nezingqondo nokwethembeka nobudlelwano futhi-ke, ukuxhuma imikhiqizo kuzikhwama zemali nokuthi yini ekuzo.
Aug 25, 2010 ku-9: 30 AM
Ngiyayithanda indlela yokungena yokuthola abalandeli futhi sivame ukukhangisa ngezinsizakalo ezinikeza lokhu. Iphuzu lami, noma kungathandeki nokho, ukuthi abantu abajulile. Izinombolo eziphansi zivala abantu futhi zibonisa ukuthi awuyena umthombo onegunya. Izinombolo eziphakeme zingakuthola ngokushesha.
Ngamanye amagama, ukuthenga abalandeli akusho ukuthi uthenga izinhliziyo nezingqondo zabo. Lokhu okuthengayo kuyinombolo ephakeme ngokwanele ukuze labo abanezinhliziyo nezingqondo bakhangwe kuyo.